အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုများကို eBay တွင်ရှာဖွေပါ Androidsis
၁၁.၁၁ စျေးကွက်သည်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာသည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းများတွင်ပါ ၀ င်သောစတိုးဆိုင်များ ပို၍ များလာပြီး၊ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင်အထူးလျှော့စျေးများရနိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပူးပေါင်းသောစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ eBay ဖြစ်သည်သင်၏အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအထူးလျှော့စျေးမှအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန် ၁၁.၁၁ အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ လူကြိုက်များသော web သည်ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားအပေါ်အထူးလျှော့စျေးပေးထားသည်။
ထို့ကြောင့်, ငါတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ eBay သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများ ဒီ 11.11 ၏အခါသမယတွင်။ သင်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သောတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုပေးသည်။
1 ယူရို ၂၂၉ အတွက် ၃၀% လျှော့စျေး Huawei P20 Lite
2 Xiaomi Mi M365 Electric Scooter သည်ယူရို ၃၃၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
3 ၁၆၉.၉၉ ယူရို ၃၅% လျှော့စျေး Xiaomi Redmi Note6Pro
4 Pocophone F1 သည်ယူရို ၂၉၉.၉၉ ဖြင့် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည်
5 Galaxy Note9၏စျေးနှုန်းမှာ ၆၄၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၄၀% လျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်သည်
6 ၃၇၂.၉၉ ယူရိုဖြင့် ၃၂% လျှော့စျေး Xiaomi Mi 8
7 ၂၀၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့် ၃၉% လျှော့စျေး Xiaomi Mi A2 ကိုရရှိသည်
8 20 ယူရိုအတွက်ရရှိနိုင်သည့် ၁၄% လျှော့စျေး Huawei Mate 14 Pro
9 ၃၅% လျှော့စျေးဖြင့် 8 ယူရိုစျေးနှုန်းဖြင့် Honor 229,99X
10 ယူရို ၁၅၅.၉၉ ဖြင့် ၃၇% လျှော့စျေး Xiaomi Mi A2 Lite
11 ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၄၂၉ ဖြင့် ၃၃% လျှော့စျေး Huawei P20
ယူရို ၂၂၉ အတွက် ၃၀% လျှော့စျေး Huawei P20 Lite
ယခုနှစ် Huawei မှတင်ပြခဲ့သောအသစ်စက်စက်ဖုန်းမော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုနှင့် notch ရှိသည့်ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်းမှာ ၅.၈၄ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိတယ်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Kirin 659 ပရိုဆက်ဆာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေပြီး ၄ GB RAM နှင့်4GB Internal Storage ပါရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် 64 + 16 MP dual camera တပ်ဆင်ထားပြီးရှေ့ကင်မရာမှာ2MP ဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီက ၃၀၀၀ mAh ပါ။ အလယ်အလတ်တန်းစားအကွာအဝေးအတွက်မော်ဒယ်ကောင်း။
eBay သည်ဤပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာသည် ၅၇% လျှော့စျေးဒါကို ၂၂၉ ယူရိုသာယူနိုင်တယ်။ ထွက်မသွားပါစေနဲ့! သူတို့ကကန့်သတ်ယူနစ်ဖြစ်ကြသည်။
Xiaomi Mi M365 Electric Scooter သည်ယူရို ၃၃၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Xiaomi ၏လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့ပတ်လည်တွင်သွားလာရန်ကောင်းမွန်သော၊ သက်သောင့်သက်သာရှိသော၊ ဂေဟစနစ်နှင့်အလင်းဖြစ်ခြင်းအပြင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီမော်ဒယ်ကျွန်တော် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို ၂၅ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်မြို့ကိုလှည့်ပတ်တဲ့အခါသင်သွားလိုတဲ့နေရာကိုအလျင်အမြန်ရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာသေချာပါတယ်။ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာအဝေးကိုလည်းပေးတယ်။ ၎င်းတွင်ရှေ့၊ နောက်နှင့်ဘရိတ်မီးများအပြင်ဘရိတ်နှစ်ဆရှိသည်။
ကျနော်တို့ကဒီမှာ Scooter ဖြတ်ပြီးလာကြ၏ eBay တွင် ၃၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မူလစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 15% လျှော့စျေး။ စဉ်းစားရန်အကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်း။
၁၆၉.၉၉ ယူရို ၃၅% လျှော့စျေး Xiaomi Redmi Note6Pro
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းများအနက်တစ်ခု စက်တင်ဘာလရဲ့အဆုံးမှာတင်ပြခဲ့သည်။ Full HD + resolution ဖြင့် ၆.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Snapdragon 6,26 ပရိုဆက်ဆာ၊ ၄ GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု ၆၄ GB ပါရှိသည်။ ဤအကွာအဝေးတွင်ပထမဆုံးကင်မရာလေးခုတပ်ဆင်ထားသောဖုန်းဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး ကိုရှာပါ 20 +2MP dual sensor, နောက်ဘက်တွင် 12 +5MP တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေစဉ်။ ဖုန်း၏ဘက်ထရီမှာ ၄၀၀၀ mAh ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာပေးသည်။
လက်ရှိအလယ်အလတ်တန်းစားကိုလွှမ်းမိုးရန်ခေါ်ဆိုသောအပြည့်စုံဆုံးမော်ဒယ်။ eBay သည်၎င်းကိုယူရို ၁၆၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်35% လျှော့စျေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pocophone F1 သည်ယူရို ၂၉၉.၉၉ ဖြင့် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည်
စျေးကွက်ထဲတွင်ဈေးအသက်သာဆုံးအဆင့်မြင့်သောဤ Pocophone F1 သည်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်း။ သြဂုတ်လကုန်မှာတင်ပြခဲ့သည်။ High-end specs များပါ ၀ င်သော်လည်းစျေးနှုန်းကြီးသည်။ ၎င်းတွင် ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Snapdragon 5,99 ပရိုဆက်ဆာသည် 845GB RAM နှင့် 6GB Internal Storage ပါရှိပါသည်။ အနောက်ကင်မရာက 12 +5MP ဖြစ်ပြီးရှေ့ဘက်မှာ 20 MP Sensor ရှိတယ်။ ဖုန်း၏ဘက်ထရီမှာ ၄၀၀၀ mAh ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးသည်။
ဒီပုံစံက 299,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင် ဒီ eBay မြှင့်တင်ရေး၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့မေ့မထားသင့်သောအဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အတွက်အလွန်ကြီးသောစျေးနှုန်းမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
Galaxy Note9၏စျေးနှုန်းမှာ ၆၄၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၄၀% လျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်သည်
Samsung ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်မော်ဒယ်လ်သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ eBay မှဤပရိုမိုးရှင်းများတွင်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်။ ဖုန်းတွင် ၆.၄ လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် Exynos 9810 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားပြီးကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၆ GB RAM နှင့်6GB Internal Storage ပါရှိသည်။ ကျောဘက်မှာ 128 + 12 MP ရှိတဲ့နှစ်ဆကင်မရာကိုစောင့်နေတယ်။ ရှေ့ 12 MP ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ ဖုန်း၏ဘက်ထရီမှာ ၄၀၀၀ mAh ဖြစ်သည်။
ဒီမော်ဒယ်စျေးနှုန်း 649,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာလာပါတယ်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းကိုယူရို ၁၀၉၉ နှင့် ၄၀% လျှော့စျေးပေးထားသည်။ စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးဖုန်းများအတွက်အထူးအံ့အားသင့်ဖွယ်စျေးနှုန်း။ ဒီအခွင့်အလမ်းပျောက်မသွားပါစေနဲ့!
၃၇၂.၉၉ ယူရိုဖြင့် ၃၂% လျှော့စျေး Xiaomi Mi 8
ယင်း၏အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးအတွင်းတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အထင်ကရတစ်ခုမှာ။ ၎င်းတွင် ၆.၂၁ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ Processor တစ်ခုအနေဖြင့် Snapdragon 6,21 သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပြီး 845 GB RAM နှင့်6GB Internal Storage ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် 128 + 12 MP dual dual ကင်မရာရှိပြီးရှေ့ကင်မရာမှာ 12 MP ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအတွက်ကတော့ ၃၃၀၀ mAh ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖုန်းတွင်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာနှင့်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှစ်ခုလုံးရှိသည်။
ဒီမော်ဒယ်ကို eBay မှာယူရို ၃၇၂.၉၉ နဲ့ရောင်းချနိုင်တယ်, မူလစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 32% ၏ကြီးစွာသောလျှော့စျေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော high-end များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်း။
၂၀၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့် ၃၉% လျှော့စျေး Xiaomi Mi A2 ကိုရရှိသည်
Android One ကိုသုံးသောဒုတိယမျိုးဆက် Xiaomi ဇူလိုင်လကုန်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ ပထမမျိုးဆက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်မှုများစွာတင်ပြသောပုံစံ။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅.၉၉ လက်မရှိသည်။ Processor တစ်ခုအနေဖြင့် Snapdragon 5,99 ကိုအသုံးပြုထားပြီး 660 GB RAM နှင့်6GB Storage ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သမျှကိုဖုန်းပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် 12 + 12 MP နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့် 20 MP ရှေ့ကင်မရာရှိသည်။ ၎င်း၏ဘက်ထရီ 3.010 mAh နေစဉ်။
eBay ကဒီဖုန်းကိုယူရို ၂၀၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချပေးတယ်၎င်းသည်မူလစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၉% လျှော့စျေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် Android One ဖြင့်မော်ဒယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
20 ယူရိုအတွက်ရရှိနိုင်သည့် ၁၄% လျှော့စျေး Huawei Mate 14 Pro
Huawei ထက်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့် တရားဝင်တစ်လအကြာတင်ပြခဲ့သည်။ Android အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အထင်ကရအမှတ်အသားတစ်ခု၏အမှတ်အသားဖြစ်ရန်ဖုန်းတစ်လုံးကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဒီ model မှာ ၆.၃၉ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် Kirin 6,39 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်ပြီး RAM 980 GB နှင့်သိုလှောင်မှု6GB ပါရှိသည်။ ဒီမော်ဒယ်ရှိပါတယ် နောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးကိုစတုရန်းပုံသဏ္inာန်ဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည် 40 + 20 + 8 MP ကင်မရာများနှင့်ရှေ့ကင်မရာမှာ 24 MP ဖြစ်သည်။ ဖုန်း၏ဘက်ထရီမှာ ၄၂၀၀ mAh ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုလည်းဖန်သားပြင်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
eBay ကဒီအဆင့်မြင့်ယူရိုကို ၇၉၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချတယ် ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ A ကောင်းဆုံး 14% လျှော့စျေးမူရင်းစျေးနှုန်း။ ဒီအမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့!
၃၅% လျှော့စျေးဖြင့် 8 ယူရိုစျေးနှုန်းဖြင့် Honor 229,99X
Honor မကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခု, သူတို့ကအမှတ်တံဆိပ်ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အတွက်ရှိနေခြင်းရရှိရန်ကူညီပေးနေသည်။ ဒီကိရိယာမှာ ၆.၅ လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Kirin 6,5 ပရိုဆက်ဆာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်၊ ​​ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာ၊ RAM 710 GB နှင့် Internal Storage6GB ပါရှိသည်။ ကင်မရာတွေမှာတော့ 20 +2MP နှစ်ဆနောက်ဘက်နှင့် 16 MP ရှေ့မျက်နှာစာတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။ ဖုန်း၏ဘက်ထရီမှာ ၃,၃၅၀ mAh ပမာဏရှိသည်။
ငါတို့တွေ့ပြီ 229,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာဖုန်းကို eBay ၌ဤမြှင့်တင်ရေး၌တည်၏။ A ကောင်း ၃၅% လျှော့စျေးမူရင်းစျေးနှုန်း။
ယူရို ၁၅၅.၉၉ ဖြင့် ၃၇% လျှော့စျေး Xiaomi Mi A2 Lite
Android One နဲ့အတူသူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယ Xiaomi ဖုန်း, နှင့်ဤအကွာအဝေးအတွင်းထစ်နှင့်အတူပထမ။ ၎င်းတွင် ၅.၈၄ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Snapdragon 5,84 ပရိုဆက်ဆာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။ ၎င်းတွင် 625 GB RAM နှင့်4GB Internal Storage ပါရှိသည်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံး၊ 12 +5MP ရှိသည်, အကယ်စင်စစ်သင်သည်ကြီးစွာသောပုံရိပ်တွေကိုယူခွင့်ပြု။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးသည်။
ဒီမော်ဒယ်တစ် ဦး မှကြွလာ eBay တွင်ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက် ၁၅၅.၉၉ ဒေါ်လာသာကျသင့်မည့်စျေးနှုန်း။ သင်နှင့်အတူဤအရည်အသွေးအလယ်အလတ်တန်းစားကိုယူရန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်း။
ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၄၂၉ ဖြင့် ၃၃% လျှော့စျေး Huawei P20
ဒီနှစ်မတ်လမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Huawei ရဲ့အဆင့်မြင့်အထင်ကရလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းတွင် ၅.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး Kirin 5,8 ပရိုဆက်ဆာအဖြစ် ၄ GB RAM နှင့် 970GB Internal Storage ပါရှိသည်။ ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကင်မရာက 20 + 12 MP ပါရှေ့ 24 အမတ်နေစဉ်, ။ ဘက်ထရီအတွက်ကတော့ ၃၄၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ facial recognition နဲ့ fingerprint sensor လည်းရှိတယ်။
eBay ကဒီအဆင့်မြင့်ယူရိုကို ၇၉၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချတယ် ဒီပရိုမိုးရှင်းအတွက်, မူရင်းစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 33% လျှော့စျေးကိုကိုယ်စားပြုသော။ ထွက်မသွားပါစေနဲ့!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » eBay တွင်အကောင်းဆုံးအရောင်းအဝယ်များဖြင့် ၁၁.၁၁ ကိုရှေ့တွင်ရယူပါ
Telegram Cloud ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ သင်သိမ်းချင်သမျှအတွက်အခမဲ့အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။